काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको दोहार्‍याएका छन्। काठमाडौंमा आफूनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन बदर भए देश अस्थिरतातर्फ जाने बताए।
उनले भने, ‘संविधान हेरौं, नेपालसँगै अन्य देशको अभ्यास हेरौं। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाए कसले पाउँछ ?’ उनले प्रचण्ड-माधव पक्षसँग ३६ प्रतिशत मात्रै रहेकाले आफूले राजीनामा दिनुपरेको अवस्थामा अर्को सरकार नबन्ने दाबी पनि गरे। ‘३६ जना मान्छे कतिपटक गन्दा ३७ हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘हामीसँग बहुमत छ। ३६ प्रतिशतले जे गरे पनि सरकार कसरी बनाउन सक्छ ?’
उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना केहीगरी भइहाले प्रचण्ड र माधव नेपाल हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न निस्कने दाबी गरे। ‘जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्छु भन्दा डिफेन्सिफ भयो ?,’ उनले भने, ‘यसलाई लगेर प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भएछ त्यसकारण यसो भन्यो भन्न मिल्छ ?’
पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्ने अदालतलाई थाहा भएको ओलीको भनाइ छ। उनले भने, ‘पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ।’
प्रचण्ड-नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेकोले प्रधानमन्त्री खोज्दै आफू कहाँ आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री भइदिनुस् न त्यति मानिदिनुस् न भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै चान्स छ ? कुनै संभावना छ प्रधानमन्त्री हुने ? एकभन्दा पनि तलतल प्रतिशत छैन उहाँहरूको संभावना। लडाइँ जित्नुभयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्छ। खोज्दै हिडेर अन्तिममा मैकहाँ आइपुग्न बेर लगाउनुहुन्न,’ उनले भने।